Maqaallo ku saabsan Kolombiya
Sidee Loo Codsadaa Magangelyo Dalka Kolombiya? Halkan Ka Ogow!
September 5, 2020 Karuna Chandna Colombia, qaxootiga
Kolombiya wali way sii socotaa intii lagu jiray dagaalkii sokeeye. Taas oo dad badan oo reer Colombia ah ay ka baqayaan dib ugu noqoshada. Dowladda ayaa dagaal kula jirta kooxaha. Sida FARC iyo Ciidankii Kacaanka ee Madaxbanaanida (ELN). Halka ay dawladu dadaal badan ku bixisay sidii loo horumarin lahaa
Xarumaha daryeelka caafimaadka ee Kolombiya
April 30, 2020 Shubham Sharma Colombia, caafimaadka
Daryeelka Caafimaadka ee Daryeelka Caafimaadka Adeegyada Caafimaadka ee Kolombiya waa Caddadka Ugu Fiican Tayada, Taagnaanta Helitaanka, iyo Qiimaha Aad u Hooseeya. Adeegyada daryeelka caafimaadka ee Kolombiya waxaa kaalinta 22aad ka galay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). Adeegyada daryeelka caafimaadka ee Colombia loo tixgeliyo
Waa kuwan tillaabooyinka lagu codsanayo fiisaha Kolombiya.
April 15, 2020 Karuna Chandna Colombia, fiisada
Nidaamka fiisada ee Colombia waa mid aad u fudud in la fahmo. Nidaamka codsigu waa khadka tooska ah ee fiisaha wuxuu elektaroonig ahaan ugu noqon doonaa dhammaan socotada. Maaddaama geeddi-socodka oo dhan hadda lagu sameeyay khadka tooska ah si aad u fuliso
Tilmaanta Gaadiidka ee loogu talagalay Safarka Kolombiya
March 15, 2020 Shubham Sharma Colombia, soo qaado
Kolombiya, waa waddan ku yaal qaybta waqooyiga ee Koonfurta Ameerika. Gaadiidka Kolombiya aad ayey u fiican tahay oo Wasaaradda Gaadiidka ay maamusho oo waxaa jira meel kasta oo gaadiid ay joogaan. Qaabka ugu doorbidida gaadiidka gudaha
Nidaamka waxbarashada ee Colombia: Iskuul hoose oo bilaash ah
February 28, 2020 Maitri Jha Colombia, dugsiga
Kolombiya waa dalka shanaad ee ugu weyn Latin America kaas oo ku dhawaad ​​laba jibaar Texas waxayna leedahay dad kor u dhaafaya 46 milyan. Haddii aad qorsheynaysid inaad u guurto Kolombiya intii aad u baahan tahay waa inaad fiirisaa nidaamka waxbarashada
Xarumaha dukaameysiga ugu gaarka ah ee laga raadiyo Bogota, Kolombiya.
November 15, 2019 Antika Kumari Colombia, wax in la sameeyo
Yaan jeclayn wax soo iibsiga iyo haddii aad aadeyso Kolombiya inta ka badan waa inaad booqataa Mall-yada ku yaal Kolombiya. Waa kuwan liiska Mall-yada ugu wanaagsan ee ku yaal Colombia Centro Commercial Andino (Mall Shopping Mall) Hacienda Santa Barbara (Shopping Mall) El Retiro (Shopping Mall) Atlantis